उपेन्द्र–राजेन्द्रको एकता छिट्टै, दलको नाम ‘राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी’ !
काठमाडौं– दस वर्षदेखि सुरु भएको मधेश केन्द्रित दलहरुबीचको एकीकरण प्रक्रियाले छिट्टै पूर्णता पाउने भएको छ।
महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टीबीचको एकीकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणका पुगेको छ। नयाँ दलको नाम ‘राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी’ राख्न दुबै पक्ष सहमत भएको बुझिएको छ।
पार्टीको झन्डामा साइकल चिह्न राख्ने सहमति भएको छ। तत्कालीन फोरमको ‘मसाल’ र राजपाको ‘छाता’ पहाडमा अस्वीकृत भएको ठानेर साइकल चिह्नमा सहमति जुटाइएको हो।
एकीकरणअघि समाजवादीले सरकार छोड्नुपर्ने राजपाको अडानलाई समाजवादीले स्वीकार गरेको छ। सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै समाजवादीले सरकार छोड्ने सहमति भएको छ।
यसैगरी पार्टीको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक समाजवाद रहने छ भने नयाँ पार्टीले ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ र ‘संघीयतावाद’लाई पनि अंगाल्नेछ।
एकीकृत पार्टीको महाधिवेशनसम्मका लागि चार सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल बनाउने सहमति जुटेको छ। जसमा महन्थ ठाकुर पहिलो वरीयतामा रहनेछन् भने त्यसपछि क्रमशः डा.बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो रहनेछन्।
समान संख्यामा पदाधिकारी राख्ने सहमति पनि जुटेको छ। दुई पक्षबीच जिल्ला तथा प्रदेशमा पनि समान हैसियत दिने सहमति भएको छ।
यसरी हुँदैछ छलफल
राजपा र समाजवादी पार्टीबीच भइरहेको एकीकरणसम्बन्धी छलफललाई दुवै पक्षले अनौपचारिक भनेका छन्। तर वार्ता भने औपचारिक रूपमै भइरहेको छ।
वार्तामा समाजवादीका तर्फबाट डा.बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतका नेताहरु सहभागी छन्। राजपाबाट राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर र आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष मण्डलका अन्य सदस्य पनि सामेल हुने गरेका छन्।
गएको शनिबार बल्खुमा भएको छलफलमा दुई दलबीच एकिकरणबारे धेरै विषयमा सहमति जुटेको हो।
दुबै दल औपचारिक रुपमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर नभएसम्म एकीकरणका विषयलाई सार्वजनिक नगर्ने पक्षमा छन्।
कहिले होला घोषणा?
राजपाका नेता महन्थ ठाकुर उपचारका लागि दिल्लीमा छन् । ठाकुर फर्केपछि औपचारिक सहमति गर्ने तयारी भएको छ।
राजपाबाट महतो र अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले सहमतिको खाका तयार पार्दैछन्।
समाजवादीसँग एकीकरणको विषयमा राजपाका केही नेताहरुमा असन्तुष्टि पनि छ। यस्तो असन्तुष्टि देखाउनेमा राजपा अध्यक्ष मण्डलका दुई सदस्य राजकिशोर यादव र अनिल कुमार झा छन्।
शरत्सिंह भण्डारी र महेन्द्र यादव पहिलादेखि नै एकीकरणको पक्षमा छन्। तर, एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष मण्डलमा प्रमुख जिम्मेवारी नपाउने भएपछि झा र यादव असन्तुष्ट देखिएको राजपा स्रोतका भनाइ छ।
राजपाका केही असन्तुष्ट नेताले राजपाबाटै अलग भएका हृदयेश त्रिपाठीलगायतका नेतासँग पनि छलफल अगाडि बढाएका छन्।
मिल्न बाँकी विषय
समाजवादी स्रोतका अनुसार दुई दलबीच राज्यको शासकीय स्वरुपमा सहमति जुट्न सकेको छैन। समाजवादी पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीका पक्षमा छ भने राजपाले संसदीय प्रणालीमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको हालको व्यवस्था नै स्वीकार्ने बताउँदै आएको छ।
राजपाका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजकसमेत रहेका राजेन्द्र महतोले धेरै विषयमा अनौपचारिक सहमति जुटेको बताए। तर, उनले सहमतिका विषय खुलाउन चाहेनन्।
यसैगरी समाजवादीका प्रवक्ता प्रशान्त सिंहले पार्टी एकीकरणको वार्ता सकारात्मक तर्फ अगाडि बढेको बताएका छन्। राजपाका महासचिव केशव झाले पनि एकीकरणको अनौपचारिक छलफलले केही दिनभित्रै मूर्त रुप लिने जानकारी दिएका छन्। समाजवादीका उपाध्यक्ष रकम चेम्जोङले धेरै विषयमा सहमति भइसकेको बताए।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि मधेश केन्द्रित दल फुट्ने र जुट्ने क्रम बढेको हो।
२०६६ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीबीच एकीकरण प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले पनि एकीकरणमा चासो दिएको थियो।
त्यतिबेला उपेन्द्र यादवले महन्थ ठाकुरलाई अध्यक्षमा अस्वीकार गरेपछि एकीकरण हुन सकेन। २०६४ सालको निर्वाचनताका भएको एकीकरणको प्रयास सफल नभए पनि मधेश केन्द्रित दलहरुबीच मोर्चाबन्दी भने भएको थियो।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेश केन्द्रित पुरानो दल सद्भावना पार्टी, पहिलो मधेश आन्दोलनबाट जन्मिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र दोस्रो मधेश आन्दोलनबाट जन्मिएको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले भाग लिए ।
निर्वाचनपछि यादव नेतृत्वको दलबाट विजय गच्छदार बाहिरिएर मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गरे । त्यसपछि यादव नेतृत्वको फोरमबाटै अलग्गिएका जेपी गुप्ताले मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) गठन गरे।
उता सद्भावनाबाट अनिल झा र रामनरेश यादव अलग्गिए भने तमलोपाबाट अलग्गिएका महेन्द्र यादवले तराई मधेश सद्भावना पार्टी गठन गरे।
यस क्रममा गच्छदारको दलबाट शरत्सिंह भण्डारी, सञ्जय साहलगायत अलग भए। भण्डारीले राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी गठन गरे भने साहले मधेश क्रान्ति फोरम बनाए।
विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) नेपाली कांग्रेसमा विलय भइसकेको छ। जेपी गुप्ता राजनीतिबाटै टाढिएका छन्। बाँकी नेताहरू मिलेर राजपा गठन गरेका छन्।
उपेन्द्र यादवले भने अशोक राईसँग एकीकरण गरी संघीय समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराईसँग एकीकरण गरी समाजवादी पार्टी गठन गरेका हुन्।